‘नाडा अटो शो’ मा श्रृंखला खतिवडा, उनको रोजाइमा कुन गाडी ? - Kendrabindu Nepal Online News
१२ भाद्र २०७६, बिहीबार १७:३१
पूर्व मिस नेपाल श्रृंखला खतिवडाले काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा जारी ‘नाडा अटो शो २०१९’ को अवलोकन गरेकी छन्।
विभिन्न ब्राण्डका सवारीसाधनहरु अवलोकन गरेकी उनले महिन्द्रा एण्ड महिन्द्राको स्टलमा पुगेर आफ्नो धारणाहरु राखेकी थिइन्। उनले महिन्द्राको गाडी अफूलाई मनपर्ने बताउँदै अरुलाई पनि सोही गाडी चढ्न सिफारिस गरिन् । उनले पार्टसहरुको मूल्य पनि अन्यको ब्राण्डहरुको तुलनामा सस्तो भएको र सहजै उपलब्ध हुने बताइन् ।
खतिवडा पनि महिन्द्राकै इलेक्ट्रिक गाडी चढ्छिन् । उनी महिन्द्रा एन्ड महिन्द्राको प्रमुख आधिकारिक विक्रेता अग्नि ग्रुपकी ब्रान्ड एम्बासडर पनि हुन् । उनी महिन्द्रा एन्ड महिन्द्राको प्रमुख आधिकारिक विक्रेता अग्नि ग्रुपकी ब्रान्ड एम्बेसडर समेत हुन् ।
Mahindra company, Shrinkhala Khatiwada.
Prevसुजुकीले ल्यायो ‘पर्वोत्सव योजना’
कम्युनिष्ट स्टेट विरुद्ध आन्दोलनको विकल्प छैन्ः बिमलेन्द्र निधीNext